Hery Rajaonarimampianina : « Tetikasa 20 hovitaina hatramin’ny faran’ny taona » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Tetikasa 20 hovitaina hatramin’ny faran’ny taona »
Fanamby no apetraka. Io no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateniny tamin’ny fitokanana ny Ivon-toeram-pamokarana herinaratra Aksaf Power, teny Ambohimanambola, omaly.
Araka izany, nanambara ampahibemaso ny Filohan’ny Repoblika tamin’izany fa tetikasa tsy latsaky ny 20 no indray hovitaina manerana an’i Madagasikara hatramin’ny faran’ny taona, ary voalaza fa hitety izany tetikasa amin’ireo toerana nametrahana izany ny tenany.
“Tsy mipetrapetraka ny fitondram-panjakana fa miasa, ary tsy ny renivohitr’i Madagasikara ihany no hahazo tetikasa, fa mieritreritra ny vahoaka malagasy rehetra any ambanivohitra ihany koa amin’ny alalan’ireo tetikasa ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany hatrany fa izany rehetra izany no vita sy tontosa dia noho ny fiaraha-miasan’ny Fitondram-panjakana sy ireo eo amin’ny sehatra tsy miankina. “Tsy ho vitan’ny Fitondram-panjakana irery izany satria tsy ao anatin’ny foto-kevitra mihitsy ny hoe ny Fitondrana irery no hanatanteraka ireny fotodrafitrasa ireny. Tsy maintsy miaraka amin’ny sehatra tsy miankina ny fanatanterahana azy ireny, ary izao fiarahana amin’ny orinasa Tiorka Aksaf Power mpamokatra herinaratra izao dia taratra iray amin’ny fahavitrihan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny tsy miankina”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Araka ny fanazavan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany, maro ny fotodrafitrasa lehibe izay efa natomboka sy mandeha amin’izao fotoana izao ary tsara ny hanamarihana izany manoloana ny vahoaka. Ao koa anefa ireo mila fotoana ka anisan’izany, hoy izy, ireo tohodrano lehibe ao Ranomafana, Volobe, Sahofika, Ambodiroaka, Antetezambato, sns. Voalaza fa anisan’ny vahaolana mahomby eo amin’ny fampandrosoana ny fametrahana fotodrafitrasa fototra.
Ampirisihina ny sehatra tsy miankina
Ankoatra izay, nitodika tamin’ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny Filoham-pirenena , ka nanaovany antso avo. “Ampirisihina ny tsy miankina, ary aoka tsy ny fitondram-panjakana irery ihany no manao antso avo fa isika rehetra no miara-miantso. Miantso anareo eo amin’ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny tenako, andao hifanome tanana ho fampandrosoana ny firenena”, hoy izy.
Nambarany rahateo mantsy fa betsaka ny fotodrafitrasa azo tanterahina miaraka, ary azo tanterahina ao anatin’ny fotoana fohy. Notsindriany ihany koa fa ny Fitondrana dia efa miezaka hatrany manamaivana, araka izay azo atao, amin’ireo fombafomba rehetra ahazoana manafaingana amin’ny fanatanterahana ireny fotodrafitrasa ireny.
Nitodika tamin’ireo teratany malagasy eto an-toerana sy ireo mpila ravinahitra, na ny Diaspora Malagasy ihany koa ny Filohan’ny Repoblika. “Miantso ny teratany malagasy eto an-toerana sy ireo any ivelany satria sehatra iray ahafaha-mivelatra amin’ny fandraharahana ny eo amin’ny sehatry ny angovo”, hoy izy nanamafy.
Nambarany mantsy fa seham-pamokarana herinaratra lehibe indrindra eto Madagasikara ny ao Ambohimanambola, ary ho taratry ny fampandrosoana an’i Madagasikara izany. Taratry ny fivelarana amin’ny any ivelany ihany koa ny fiaraha-miasa amin’i Tiorkia satria vao tamin’ny taon-dasa no nandalo teto amintsika ny Filoha Tiorka, ary ankehitriny nitondra famokarana angovo ny orinasa Tiorka Aksaf Power.